Can ' t see all the - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: can ' t see all the hands , (Englisch - Burmesisch)
မင်း​တို့ မင်္ဂလာဆောင်​အတွက် ဂုဏ်​ပြု​ပါတယ်​။
သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။
it doesn't cover all the restrictions, but it's still useful.
၎င်းသည် ကန့်သတ်ချက်အားလုံးအတွက် အကျုံးမဝင်သော်လည်း အသုံးဝင်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပေါလုလက်ဖြင့် အလွန် တရာ ထူးဆန်းသော တန်ခိုးများကိုပြတော်မူသည်ဖြစ်၍၊
၎င်းက ထိုမျက်နှာပြင်များမှ လက်သို့ ပြန်လည် ကူးစက်ရောက်ရှိမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
နောက်ဆုံး၌ မိန်းမသည်လည်း သေလေ၏။
ထိုကြောင့်၊ တွဲလွဲနေသောလက်တို့နှင့် အားမရှိသောဒူးတို့ကို ခိုင်ခံ့စေကြလော့။
အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏လက်တော်သို့ ကျရောက်ခြင်း အမှုသည် ကြောက်မက် ဘွယ်သောအမှုဖြစ်သတည်း။
ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့ကို သန့်ရှင်းသောနမ်းခြင်းနှင့် နှုတ်ဆက်ကြလော့။
တဖန်ကြည့်ပါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်တပြည်လုံးကို သင်အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ငါခန့်ထားပြီဟု ယောသပ်အား မိန့်တော်မူလျက်၊
and you know people cough on me all the time
နောက်ပြီး လူတွေက တချိန်လုံး ကျွန်တော့်ဖက်လှည့်ပြီး ချောင်းဆိုးကြတယ် သိလား
when rinsing, water on the forearms must be prevented from running back to the hands.
ဆေးကြောချိန်တွင် လက်ဖျံများပေါ်ရှိ ရေ လက်များပေါ်သို့ ပြန်စီးဆင်းလာခြင်း မဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
စီရင်ကြသည်နှင့်အညီ ဗာနဗနှင့်ရှောလုတို့တွင် သင်းအုပ်တို့ ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏။
ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကို မတရားသောသူတို့တွင် ချုပ်ထားတော်မူပြီ။ လူဆိုးတို့၏ လက်သို့အပ်တော်မူပြီ။
တမြို့လုံးသည် တံခါးနားမှာ စုဝေးလျက်ရှိကြ၏။
စားပွဲမှစ၍ စားပွဲတန်ဆာနှင့် ရှေ့တော်မုန့်ကို၎င်း၊
varius multiplex multiformis (Latein>Italienisch)anu ba problema sa pagiging bisaya (Tagalog>Englisch)como era tu dia (Spanisch>Deutsch)präsentationsfolien (Deutsch>Russisch)tiefel (Deutsch>Englisch)astragalo (Holländisch>Englisch)requested (Englisch>Italienisch)improvisation (Englisch>Chinesisch (Vereinfacht))nagka buhol buhol (Tagalog>Englisch)treonin (Slowenisch>Englisch)dill leaves meaning in tamil (Englisch>Tamilisch)mot valise (Französisch>Italienisch)forelæggelse (Dänisch>Slowenisch)sayang (Malaysisch>Koreanisch)edf (ou edf gdf) (Französisch>Englisch)hiba (Spanisch>Englisch)2 din se bukhar hai (Hindi>Englisch)hand sanitizer (Englisch>Sinhala)i feel so tired (Englisch>Malaysisch)armée (Französisch>Italienisch)inaso (Tagalog>Englisch)let play for cricket (Englisch>Hindi)pothum da (Tamilisch>Kanaresisch)insediamenti (Italienisch>Rumänisch)nailibing na (Tagalog>Englisch)